09/03/2018 - Page 4 sur 4 -
Andron’ny vehivavy : Nampiseho firaisan-kina ireo mpanao gazety vehivavy
Tsy diso anjara ihany koa ny mpanao gazety vehivavy tamin’ny fanamarihana ny andron’ny 8 martsa, fa dia nifamotoana teny amin’ny akademiam-pirenena momba ny fanatanjahantena eny Ampefiloha. Tanjona ny « mba ho mpanao gazety mendrika sy …Tohiny
Toa ny vehivavy maneran-tany, dia nankalaza ny andron’ny 8 martsa ihany koa ny vehivavy teto Madagasikara fa isan’ny nanamarika ny andron’ny omaly, ny “Rodobe ho an’ny vehivavy mahefa” izay notanterahina tetsy amin’ny farihin’ny Anosy, ary …Tohiny
Tsy kely làlana ireo mpandraharaha mpanao hosoka. Sarona teny amin’ny toeram-ponenana iray teny Ivandry ny 7 marsa lasa teo ny lafarinina efa simba, 26 taonina, nefa mbola nokasaina amidy sy aparitaka tany amin’ireo mpanao mofo. …Tohiny
Havokavok’ i Madagasikara tokoa raha ny faritra Alaotra Mangoro no resahina, indrindra ny lafin’ny fambolem-bary. Nijery manokana ny vahoaka Amparafaravola noho izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina taorian’ny fampanantenana izay nataony tamin’ny vahoaka, ary tanteraka izany ...Tohiny